मतदाता नचिन्ने ‘टुरिष्ट’ उम्मेदवारलाई जनताले विश्वास गर्दैनन्ः नेता राणा – Nepal Journal
Posted By: Nepal Journal November 22, 2017 | ६ मंसिर २०७४, बुधबार १७:४९
नेपाली काँग्रेसका युवा नेता उदय शम्शेर राणा नेपाल सरकारका बहालवाला अर्थ राज्यमन्त्री हुन् । मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ललितपुर क्षेत्र नं. १ बाट नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार रहेका राणाको प्रतिस्पर्धी हुन् वामतर्फका साझा उम्मेदवार नवराज सिलवाल । नेपाल प्रहरीको डिआईजीबाट भर्खरै अवकाश लिएका सिलवालले आफ्नो चर्चाका कारण उदय शम्शेर ललितपुरका नेता भएको कुरा जनताले थाहा पाएको भनी भाषण गरेपछि यी दुई प्रतिस्पर्धी बीचमा घोचपेच बढेको छ । निर्वाचन गतिविधि र उदयशम्शेरको ललितपुरमा उम्मेदवारी औचित्यको सम्बन्धमा नवीन ढुंगानाले उनिसंग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
चुनावी अभियान कस्तो हुँदैछ ?
चुनावी अभियान निकै राम्रो ढंगबाट अगाडि बढेको छ । अहिले एक किसिमको जनलहर नेपाली काँग्रेसमा देखिएको छ । अहिले हामीले हाम्रो क्षेत्र उपत्यका भित्रको वडाहरु घुमिरहेका छौँ । गोदावरी नगरपालिकामा जनताको विशेष लहर देखिएको छ । भर्खरै मात्र टिकाभैरवमा राप्रपाका जिल्ला सदस्य लगायत एउटा पुरै महिला समूह नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेको छ । अन्य पार्टी परित्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुको लहर बढ्दै गएकोले समग्रमा अभियान निकै राम्रो छ ।
“बि.स.२०४८ सालदेखि ७० सालसम्म हुन नसकेको बिकास मैले २०७० सालपछि चार वर्षमा गरेको छु । मैले ललितपुरको बिकासका लागि चाहे त्यो रकममा होस् वा योजनामा धेरै काम गरेको छु । जनताले उदयले गरेको काम देखेका छन् । कान्ती लोकपथ को लागि साँढे ३ अरब रकम बिनियोजन, ललित घुम्ती एक अबर २५ करोड, बगुवा चन्दनपुर ७५ करोड, टुगिंन करीडोर १० करोड, तीनपाने दलचोकी सडक ८ करोड, भूकम्प पछिका पूर्ननिर्माण र राहातका प्याकेजहरु लगायत मुख्यगरी सडक र खानेपानीका योजनामा मैले गरेको काम जनताले देखेका छन । मलाई जनताप्रति पूर्ण विश्वास छ । मलाई मत दिनुहुनेछ ।”
तपाइको दिनभरीको तालिकामा के के कुराहरु हुन्छन् ?
यतिबेला मेरो दैनिकी निकै ब्यस्त बनेको छ । बिहान ६ बजेबाट सुरु हुने मेरो कार्यतालिका रातिको १२ बजे पुगेर अन्त्य हुन्छ । बिहानैदेखि घरदैलो अभियान सुरु गर्छौं, कर्नर मिटिङ, भेटघाट, छलफल, आन्तरिक पार्टीको बैठक फेरि घरदैलो यस्तै गरी दिन बितेको छ ।
“उनी एक्स डिआईजी हो । त्यो भन्दाबढी केही पनि होईन । ललितपुरको भूगोल र मतदाता नचिन्ने टुरिष्ट उम्मेदवारलाई जनताले विश्वास गर्दैनन् । मैले बनाएको सडकमा मोटर गुडाएर, मैले बनाएको पधेरोमा पानी पिएर मेरै बिरुद्धमा बोल्दै भोट माग्न हिड्ने उम्मेदवारबारे के बोल्ने के भन्ने ?”
उदय शम्शेर राणालाई ललितपुरका जनताले दोस्रो पटक किन जिताउने ?
ललितपुरका जनताले उदयशम्शेर राणालाई दोस्रो पटक जिताउने कारण तीन वटा छन ।
क. ललितपुरको भौतिक पूर्वाधार विकासमा मैले खेलेको भूमिका
बि.स.२०४८ सालदेखि ७० सालसम्म हुन नसकेको बिकास मैले २०७० सालपछि चार वर्षमा गरेको छु । मैले ललितपुरको बिकासका लागि चाहे त्यो रकममा होस् वा योजनामा धेरै काम गरेको छु । जनताले उदयले गरेको काम देखेका छन् । कान्ती लोकपथ को लागि साँढे ३ अरब रकम बिनियोजन, ललित घुम्ती एक अबर २५ करोड, बगुवा चन्दनपुर ७५ करोड, टुगिंन करीडोर १० करोड, तीनपाने दलचोकी सडक ८ करोड, भूकम्प पछिका पूर्ननिर्माण र राहातका प्याकेजहरु लगायत मुख्यगरी सडक र खानेपानीका योजनामा मैले गरेको काम जनताले देखेका छन । मलाई जनताप्रति पूर्ण विश्वास छ । मलाई मत दिनुहुनेछ ।
ख. म इमेज राम्रो भएको नेता हुँ
हरेक नेपाली नागरिक के सोच्छन भने हाम्रो नेताहरुको इमेज राम्रो होस । कुनैपनि कुराका दाग लागेको मान्छे राजनीतिमा लागेपछि कसरी सफेद हुनसक्छ । ललितपुर जिल्लामा म यस्तो उम्मेदवार हुँ जो अहिलेसम्म भ्रष्टाचारमा मुछिएको छैन । मैले आजसम्म राजनीतिलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरेको छैन । जनताको सेवा गर्न मैले राजनीति गरेको हुँ त्यसैले मेरो प्रतिष्पर्धी नै ललितपुरमा छैनन् जस्तो मलाई लाग्छ ।
ग. म यस क्षेत्रको रैथाने हुँ जनताको समस्या बुझेको छु ।
म १८ वर्षको हुँदादेखि यो क्षेत्रको राजनीतिमा सक्रिया छु । जनताको घर दैलोमा पुगेको छु । जनताका व्यक्तिगत र सामदायिक समस्या र समाधान मलाई राम्ररी थाहा छ । जनताले मेरो विपक्षामा उभिएका उम्मेदवारबारे राम्ररी बुझेका छन् । ललितपुरको भूगोल र मतदाता नचिन्ने टुरिष्ट उम्मेदवारललाई जनताले विश्वास गर्दैनन् भन्ने मेरो विश्वास हो ।
तपाँई यसो भन्दै भन्दै हुनुहुन्छ, उता तपाँईको प्रतिद्धन्दी वाम उम्मेदारले आफ्नो कारणले उदयशम्शेर राणाको नाम चर्चामा आएको भन्दै भाषण दिई रहेका छन ?
हेर्नुस, उहाँलाई अहिले चुनावको निकै प्रेसर परेको छ । उहाँ एउटा साधारण एक्स डिआईजी हो । त्यो भन्दाबढी केही पनि होईन । उहाँ खासमा ललितपुरका स्वतन्त्र उम्मेदवार गुनबहादुर थापाका कारण चर्चामा आएका हुन् ।
थापा उनै मान्छे हुन जो नवराज सिलवाल भन्ने व्यक्तिबाट ठगिएका थिए । गुन बहादुरले भनेका छन नवराज सिलवालको चर्चा मैले गर्दा भएको हो । त्यसैले त्यस्ता प्रतिस्पर्धीबारे बोल्नुको अर्थ छैन । मैले बनाएको सडकमा मोटर गुडाएर, मैले बनाएको पधेरोमा पानी पिएर मेरै बिरुद्धमा बोल्दै भोट माग्न हिड्ने उम्मेदवारबारे के बोल्ने के भन्ने ? अब कस्ले कस्लाई चिनाउने आफैँ भन्नुस् ।
अन्त्यमा ललितपुरका जनतालाई केही भन्नुछ ?
उदय शम्शेर बिकास प्रेमी नेता हो । उदयले ललितपुरको बिकासका लागि खेलेको भूमिकालाई जनताले अन्याय गर्नु हुँदैन होला भन्ने मलाई लागेको छ । उहाँहरुले मलाई न्याय गर्नु हुन्छ भन्नो कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु ।
देउवा, पौडेल र कोइराला २ नं प्रदेशमा संयुक्त चुनावी प्रचारमा
नेपाली काँग्रेसद्वारा बागी उम्मेदवारको सदस्यता खारेज
कांग्रेसले चुनाव जितिसक्यो, विधि पुर्याउन बाँकी छ : कांग्रेस नेता सिंह
वाम तालमेल अस्वाभाविक, अनैतिक र ‘मोरल’ नभएकोः नेता महत
Be the first to comment on "मतदाता नचिन्ने ‘टुरिष्ट’ उम्मेदवारलाई जनताले विश्वास गर्दैनन्ः नेता राणा"